Stephen King, kubudirira kwekusingaperi kwemunyori ane tarenda | Zvazvino Zvinyorwa
Stephen King: kubudirira kwekusingaperi
John Ortiz | | Biography, Vanyori, Type, Nhoroondo yezvinyorwa
Stephen King, kubudirira kwekusingaperi.
Kana paine munyori ari mukukanganisa nhasi kwehunyanzvi hwepeni yake yeropa, ndiStephen King.. Uyu wekuAmerican anobva kuPortland akaratidzira kumberi uye shure mune inotyisa mhando mumabhuku epasirese. Kuda kwake kwekutya kwekunyepedzera kunouya kubva iye nemukoma wake David (vangangoita makore mashanu neanomwe zera rimwe nerimwe) vakaverenga nyaya dzinotyisa kubva munhevedzano iyi kune mumwe nemumwe. Shock SuspenStories y Ngano kubva kuCrypt.
Kune vazhinji mafeni emunyori, uye pakati peavo vasinganyatso kumuziva, panogara paine kutaura kwekubudirira kwake, senge Kupenya o Makuva Emhuka, pakati pemabasa akanakisa aMambo. Chokwadi ndechekuti mukurumbira wake usati wauya, King akararama hupenyu hwakaoma zvakanyanya naamai vake nemunin'ina wake.
1 Stephen King uye kusiiwa
2 Hama dzaMambo nepepanhau ravo
3 Stephen King uye iyo yemavambo mavambo erudo rwake kumabhuku
4 Kuenderera kwematambudziko ehupfumi
5 Mukusangana nerudo rwehupenyu hwake
6 Kuvapo kwekudhakwa
7 Kubudirira kwekutsungirira uye ziso rakanaka raTabitha
Stephen King uye kusiiwa
Apo munyori aingova nemakore maviri nehafu ekuberekwa, baba vake (Donald Edwin King) vakasiya mhuri yake. Amai vaMambo, Nellie Ruth Pillsbury waMambo, vakagara vachirangarira chirevo "Ndiri kuenda kumidzanga," yakataurwa naDonald vasati vaenda zvachose. Kubva ipapo, Nellie aifanira kushanda nesimba kurera vana vake vaviri. Kune izvi akashanda panguva imwechete mumabasa anosvika matatu.
Nekufamba kwenguva, mushure mekuverenga kwake pamwe nemukoma wake pamwe naamai vake (anonyanya kutaura nyaya), kuda kwaStephen kwemabhuku kwakakura, kunyanya kutya. Kunyange zvakadaro, mari yaigara iri muganho wekugona kutsvenesa. Urombo hwaionekwa kwazvo mavari. Munguva yechando, kunyangwe, hama dzaMambo vaifanira kuenda kune imwe imba yamaiguru vavo kuti vakwanise kugeza nemvura inopisa munguva yechando, iyo muMaine yaive yakaoma kwazvo.
Ruth aigara achitarisira kuti murume wake achadzoka, asi zvaive zvisina kudaro. Kushaiwa kwababa kwaive nyore pamba, zvese pamoyo uye nemari, uye izvo zvakakanganisa hama dzaMambo pamoyo.
Hama dzaMambo nepepanhau ravo
Kunyangwe zvese, David naStephen vakakurira vakasimbiswa nerutsigiro rwaamai vavo, kusvika padanho rekuti havana kuzvigumira kuyedza kutora kwavo kufarira tsamba. Kana vanin'ina vane chero chinhu, irwo rwaive rudo rwekuverenga. Saizvozvo, zvese muhupenyu hwake zvakakanganiswa nemabhuku (zvinotyisa, kunyanya), pakanga pasina zuva ravasina kuverenga chimwe chinhu kana kudzidzira kunyora.
Muna 1959, uye achibatsirwa netapureta yekare yaakawana, David akagadzira iyo Daves mamvemve, rudzi rwepepanhau uko murume wechidiki akaburitsa mazano ake. Ikoko, Stephen King akapa kune dzakasiyana siyana wongororo dzaakaita nezve terevhizheni zvirongwa zvenguva iyoyo.
Uku ndiko kwaive kwekutanga kusangana kwaMambo netsamba. Kunyangwe iri murombo zvakanyanya, kugadzirwa kweiyo Daves mamvemve yakanga iri nhau mutaundi rose.
Stephen King uye iyo yemavambo mavambo erudo rwake kumabhuku
Apo Mambo aive nemakore gumi nemaviri, akawana mamwe mavara mumabhokisi kumba kwatete vake. Izvo zvaive nezvekuyedza kwakawanda kwakaitwa nababa vake kuti vakwanise kutsikisa mamwe mabasa akaitwa naiye; zvese zvakarambwa. Panguva iyoyo Stefano akanzwisisa kuti kuyambuka kwake nenyika yetsamba kwakaratidzirwa nechimwe chinhu chikuru kupfuura iye., chimwe chinhu chakaramba chiripo kubva muropa, kunyangwe uye nekugara kusingaperi kwababa vake.
Unganidzo yemabasa naStephen King.
Kuenderera kwematambudziko ehupfumi
Mushure mekugutsikana kuti rake raive bhuku, murume wechidiki Stephen akatanga kuendesa nyaya dzake kumagazini nemapepanhau kuti abudiswe, asi zvakarambwa uye zvakare. Chinhu chega chakamusiyanisa nababa vake kusarega, asi akaramba uye achishingirira.
Chikoro cheLisbon Hish chakavhura mikova kumunyori uye ipapo akakwanisa kukwana mukati. Muchokwadi, mune iyo institution, kune tarenda rake netsamba, King ainyatso kuzivikanwa.
Nekudaro, kunyangwe akapinda musangano pakaonekwa basa rake, uye achimanikidza nhepfenyuro dzakasiyana kuti aribudise, King aisakwanisa kudzikama mune zvemari. Munyori akauya kuzoshanda sekuchera guva kuitira kuti awane imwe mari yekuwedzera. King aifanirwawo kupa ropa rake kakati wandei kuti pave nechikafu kumba.
Kana Mambo aine chimwe chinhu chekutenda nacho, ndiyo myopia yake, tsoka dzakatsetseka uye neBP, nekuti izvi zvinhu zvakamuponesa kubva kuVietnam.. Nenzira, chinzvimbo chake pahondo iyi chaive chakajeka uye chisina kujeka.
Mukusangana nerudo rwehupenyu hwake
Stephen akasangana naTabitha Jane Spruce, aizova mudzimai wake, paaiita basa renguva isina kuzara kuraibhurari yeyunivhesiti. Akadzidza nhoroondo uye aida nhetembo. Zvishoma nezvishoma rudo rwakayerera pakati pavo, vaive nemwanasikana wavo wekutanga ndokubva varoora.
Kunyangwe hazvo King aive nemabasa maviri uye mudzimai wake anga aine rimwe chete, mari yacho yanga isiri kufamba zvakanaka. Nechikonzero ichocho ivo vaifanira kugara mukaravhani. Izvo zvakaputsa zvishuwo zvaMambo. Pfungwa iyi yakaramba iri mupfungwa dzake kuti aifanirwa kudzokorora rungano rwakaipa rwamai vake.
Matambudziko ese aya akaturikidzana, imwe mushure meimwe uye zvakabatana zvakananga nehupfumi, zvakakonzera kuti munyori awire mukuora mwoyo uye, gare gare, kupindwa muropa nedoro. Uye isu hatisi kutaura nezvemumwe munhu zvakajairika, aiwa, uyu aive munhu uyo ​​mugore rake rechitatu rebasa rekuyunivhesiti anga atopedza zvinyorwa zvishanu, apo vamwe vadzidzi havana kana kufunga nezvekunyora imwe.
Izvo zvinoitika ndezvekuti mazwi acho haana kukosheswa zvakakwana panguva iyoyo, hongu, kwete iwo emumwe munhu asingazivikanwe, asina kubva kumhuri yevanyori vane mukurumbira. Ndiwo musimboti mukuru wakapihwa naMambo, anga asingazive madzitateguru ekunyora.
Kubudirira kwekutsungirira uye ziso rakanaka raTabitha
Muna 1973 Stephen King aishanda pane nyaya yakavakirwa pane nyaya yemukadzi wechidiki aishungurudzwa kuchikoro. Zvakare, musikana uyu aive mwanasikana weanonyanya kufarira zvechitendero. Ehe, iyo nyaya yaive Carrie. Kunyangwe hazvo nyaya yacho yaive yakanaka uye yakapindwa muropa, King aisatenda mukugona kwayo, haana kuzvifunga nesimba rinodiwa, saka akaikanda mumarara emarara.
Tabitha akakwanisa kuwana chinyorwa ichi paaiita basa repamba, akachiverenga, ndokuudza murume wake kuti zvaizobudirira, kuti haana kuzviisa parutivi. Hapana padhuze neichoicho.
Muna 1974 Stefano akasvikirwa neDoubleday Publishing, uyo akafunga kushambadza nyaya uye kubhadhara $ 2.500 yayo. Izvo zvese zvaive nekuda kwekupindira kwemupepeti Bill Thomson, shamwari yaStephen. Iwo manzwiro aionekwa mumhuri yaMambo, zvisinei, nhau dzakanaka hadzina kusvika ipapo.
Stephen King siginecha.
Iyo New American Library yakazobata Dobleday ndokumupa $ 200. yekodzero dze Carrie. Mushure mekutaurirana kwakawanda, huwandu hwacho hwasvika madhora mazana mana emazana.
Zvinoenderana nemitemo iyo Doubleday yakavambwa, munyori aikonzera hafu yezvakakurukurwa. Fue kungofanana naStephen King akakwanisa kusiya mamwe mabasa uye kuzvipira zvizere pakurarama kubva mutsamba. Zvichida zvinosuruvarisa pane zvese kuti Rute, amai vemunyori, vakatadza kunzwa kukunda kwemwanakomana wavo. Akafa kutaurirana kusati kwapera, akatambura nekenza. Izvi zvakakanganisa Stephen zvakanyanya.
Dzimwe dzese inyaya dzakarukwa zvinehunyanzvi, uye kana usati waaverenga, ndinokurudzira kuti uatsvage.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Stephen King: kubudirira kwekusingaperi
Chokwadi chiri shure kweWhite White